musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Vakadzivirirwa chete ndege yeKLM: Amsterdam-Singapore
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Singapore Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Vakadzivirirwa chete ndege yeKLM: Amsterdam-Singapore.
KLM Royal Dutch Airlines ichapa kufamba kwakasarudzika pasina mahwanda nendege dzakatemerwa Vaccinated Travel Lane (VTL) kuenda kuSingapore kubva kuAmsterdam Muvhuro neMugovera wese.
Kubva musi wa21 Gumiguru 2021, Air France inoshandisa ndege mbiri dzakatemwa dzeVaccinated Travel Lane (VTL) kubva kuParis kuenda kuSingapore.
Kubva musi wa1 Mbudzi 2021, KLM inoshandisa ndege mbiri dzakatemwa dzeVaccinated Travel Lane (VTL) kubva kuAmsterdam kuenda kuSingapore.
Vafambi vanofanirwa kusangana nezvose zvinodiwa Vaccinated Travel Lane (VTL).
Kubva munaNovember 1, 2021 KLM Royal Dutch Airlines ichapa kufamba kwakasarudzika pasina mahwanda nendege dzakatemerwa Vaccinated Travel Lane (VTL) kuenda ku Singapowo kubva kuAmsterdam Muvhuro wega wega neMugovera.
Kubudikidza nehubhu yayo muAmsterdam-Schiphol Airport, KLM vachatora netiweki yavo yekuwedzera uye vopa ina vhiki nevhiki dzakatemwa VTL nendege uye nhanhatu vhiki nevhiki dzisina kusarudzwa VTL nendege Singapowo.
Roland Coppens, General Manager Air France KLM South East Asia neOceania vakataura kuti: "" Tinonyatsonzwisisa kuti vanhu vanoda kufamba uye kubatana zvakare nemhuri uye neshamwari, uye tinofara kutangazve kutandara uye bhizinesi kuenda Singapowo. Air France neKLM yakagadzira inoenderana netiweki ina dzakatemwa VTL kuenda kuSingapore, pamwe nendege nhanhatu dzisina kusarudzwa dzeVTL kubva kuParis neAmsterdam. Nedandemutande redu rakakura reAir France KLM, tiri kukwanisa kubatanidza nyika zhinji dzeVTL tichishandisa nzvimbo dzedu mbiri muParis neAmsterdam, nemamiriro echikwereti. ”
KLM purogiramu yekufambisa kubva kuAmsterdam kuenda kuSingapore
urongwa Nhamba Yendege zuva kuenda kusvika ndege
kusvika 31 Gumiguru 2021 KL835 / KL837 / KL839 mazuva ose 21: 15 15: 45 + 1 B787 / B77W
01 Mbudzi 2021 kusvika 26 Kurume 2022 KL835 / KL837 / KL839 Chipiri
Chishanu 21: 05 16: 20 + 1
KL833 (VTL) Muvhuro
MaBrits Adzoka! 16 Flights a Vhiki Zvino Pakati peUK...
eTurboNews Mutori wenhau Anotaura Nezvakakosha...
Mutsva Wekudzivirira weCOVID-19 Wakagadzirwa muChina Unowana ...